काबुल – आठ सयभन्दा बढी अनुहार छन् उम्मेदवारका । अनि मतपत्र १५ पृष्ठको । तर मत दिने हो एकजनालाई । अब कसरी हाल्ने मत ?
साथै उनीहरुले मतपत्रमा छापिएको आफ्नो तस्वीर पनि टेलिभिजन र पत्रिकामार्फत प्रचार गर्ने गरेका छन् । प्रचार सामग्रीमा उम्मेदवारहरुले ‘यो तस्वीर यति पेजमा छ हेर्नुहोला’ भनेर आफ्नो तस्वीर चिनाउने गरेका छन् । तर यस निर्वाचनमा पनि पहिलेजस्तै तालिवान र इस्लामिक स्टेटले कारवाही गर्ने जनाएका छन् । उनीहरुले मतदान केन्द्रमा पनि हमला गरिरहेका छन् । उनीहरुले मतदान गर्न नजान सर्वसधारण नागरिकलाई भनिरहेका छन् । रासस/एएफपी
भारतको लोकसभामा लिए एक सांसदले संस्कृत भाषामा शपथ (भिडियो)
अर्को हप्तादेखि हजारौं अवैध आप्रवासीलाई देशबाट निकाल्ने ट्रम्पको भनाइ
चे ग्वेभाराको यो तस्वीर किन यति धेरै लोकप्रिय भयो ?
हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले मागिन् माफी